Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Iilọ nkwari akụ Hawaii kọrọ nnukwu ego ha nwetara na Eprel 2021
Iilọ nkwari akụ Hawaii kọrọ nnukwu ego ha nwetara na Eprel 2021
Kwa afọ, ọnụ ọgụgụ maka ụlọ nkwari akụ nke steeti RevPAR na ebe obibi dị nnọọ ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa anọ mbụ nke 2020.
Ego ntinye ego nke ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na steeti niile ruru $ 237.2 nde (+ 2,210.8%) n'April
Njirimara Klasịs akwụ RevPAR nke $ 335, na ADR na $ 720 na obibi nke 46.5 pasent
Midscale & Economy Class properties nwetara RevPAR nke $ 148 na ADR na $ 261 na ebe obibi nke 56.8 percent
Na Eprel 2021, ụlọ oriri na ọ hotelsụ Hawaụ dị na Hawaii kọrọ akụkọ dị elu karịa ego ha nwere n'otu ụlọ (RevPAR), nkezi ụbọchị (ADR), na ebe obibi ma e jiri ya tụnyere Eprel 2020, nke bụ ọnwa mbụ ọnwa mbụ nke mbibi na-ebibi ihe site na ọrịa COVID-19. Iwu iche iche nke ndị Hawaii nyere ndị njem n'ihi ọrịa COVID-19 malitere na Machị 26, 2020, nke mere ka mbelata dị egwu maka ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ. Kwa afọ, ọnụ ọgụgụ maka ụlọ nkwari akụ nke steeti RevPAR na ebe obibi dị nnọọ ala ma e jiri ya tụnyere ọnwa anọ mbụ nke 2020.
Dị ka Hawaii Hotel Performance Report bipụtara site na Hawaii Tourism Authority (HTA) Ngalaba Nchọpụta, RevPAR na steeti niile na Eprel 2021 bụ $ 153, nke karịrị 1,000 pasent dị elu karịa Eprel gara aga. ADR karịrị okpukpu abụọ nke afọ gara aga ($ 300, + 138.6%), na ebe obibi bụ 50.8 pasent (+ 42.0 pasent isi), nke ga-abụrịrị mmechuihu arụmọrụ tupu ọrịa (Akara 1). Ihe nchoputa nke ihe nchoputa ahu weputara data nke STR, Inc., chiputara, nke n’eme otutu ihe nlere anya nke oma banyere ihe nlere di na Hawaiian Islands. Maka Eprel, nyocha ahụ gụnyere akụ 138 na-anọchi anya ụlọ 43,760, ma ọ bụ 81.0 pasent nke ụlọ obibi niile na 84.4 pasent nke ụlọ obibi na-arụ ọrụ nwere ọnụ ụlọ 20 ma ọ bụ karịa na Hawaiian Islands, gụnyere ọrụ zuru oke, ọrụ pere mpe, na ụlọ ezumike. Agunyeghi ezumike ezumike na ihe ndi ozo n'oge nyocha a.
N'ime Eprel 2021, ọtụtụ ndị njem si na steeti na-ejegharị ma na-agagharị na mpaghara ga-agabiga iwu onwe onye nke ụbọchị 10 iji wepụta onwe gị iche na nyocha COVID-19 NAAT na-esite n'aka Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi site na mmemme nchekwa njem nke steeti. . Ndị njem trans-Pacific niile na-esonye na mmemme nnwale tupu njem a chọrọ ka ha nwee nsonaazụ nnwale tupu ha apụ na Hawaii. Kauai County laghachiri na Nchekwa njem na Eprel 5, 2021. Mpaghara nke Hawaii, Maui na Kalawao (Molokai) nwekwara iche iche iche na-anọ na Eprel.
Ego ntinye ego nke ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na steeti niile ruru $ 237.2 nde (+ 2,210.8%) n'April. Ọnụ ụlọ chọrọ 789,800 ụlọ abalị (+ 868.5%) na ọkọnọ ụlọ bụ 1.6 nde ụlọ abalị (+ 67.3%) (Nyocha 2). Ọtụtụ ihe mechiri emechi ma ọ bụ belata arụmọrụ bidoro na Eprel 2020. Ọ bụrụ na agbakọtara ebe obibi maka Eprel 2021 dabere na mbubata ọrịa na-efe efe site na Eprel 2019, ibi n'ime ya ga-abụ pasent 12.2 maka ọnwa ahụ (Ngosipụta 7). N'ihi mbelata nnyefe ndị a, ọnụọgụ data maka ụfọdụ ahịa na klaasị ahịa adịghị maka Eprel.
Njirimara Klasịs akwụ RevPAR nke $ 335, na ADR na $ 720 na obibi nke 46.5 pasent. Midscale & Economy Class properties nwetara RevPAR nke $ 148 (+ 616.2%) na ADR na $ 261 (+ 186.8%) na obibi nke 56.8 pasent (+ 34.0 pasent ihe).
Hotelslọ oriri na ọ Maụ Maụ Maui County duuru ógbè ahụ n'April RevPAR nke $ 300 (+ 2,220%), na ADR na $ 483 (+ 333.5%) na obibi nke 62.1 pasent (+ pasent 50.5). Mpaghara ntụrụndụ nke Maui nke Wailea nwere RevPAR nke $ 420, na ADR na $ 773 na ebe obibi nke 54.4 pasent. Mpaghara Lahaina / Kaanapali / Kapalua nwere RevPAR nke $ 251 (+ 6,222.4%), ADR na $ 399 (+ 407.2%) na ebe obibi nke 62.9 pasent (+ 57.8 pasent isi).